सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्री देउवाले “मेरो भाषण कसले लेखेको हँ ?” भनेपछि… « Naya Bato
सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्री देउवाले “मेरो भाषण कसले लेखेको हँ ?” भनेपछि…
असोज २७, काठमाडौ । हुन त प्रधानमन्त्री आफैंले भाषण लेख्दैनन् । भाषण कि त सरकारका विशिष्ट कर्मचारी या त आफनै विज्ञबाट लेखाइन्छ । कस्ले लेख्यो त्यो हेक्का भने प्रधानमन्त्रीलाई हुनेगर्छ र हुनुपर्छ ।
तर, सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्रीले मेरो भाषण कस्ले लेखेको हँ भन्ने परिस्थिति आउनुको पछाडि को दोषी ? प्रधानमन्त्री हो या उनका स्वनाम धन्य सल्लाहकार । सन्दर्भ, प्रहरी दिवसको दिनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजना गरिएको बिशेष कार्यक्रमको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख अतिथिको हैसियतमा थिए समारोहमा । कार्यक्रमा गृह मन्त्री जनार्दन शर्मा, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, पूर्व सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति थिए । गृह मन्त्री शर्माले मतव्य राखेपछि पालो थियो प्रधानमन्त्री देउवाको । देउवा माइकतर्फ अघि बढे ।
एकजनाले उनकालागि तयार पारेको लिखित मन्तव्य थमाइदिए । माइक उता अन नै थियो । देउवाले ति व्यक्तिलाई प्वाक्क सोधिहाले , यो भाषण कसले लेखेको हँ ? उनले सजकता कै लागि सोधेका होलान्। भै दियो उल्टो ।
अन माइकवाट तुरुन्त समारोहभर फैलिहाल्यो , यो भाषण कस्ले लेखेको हँ । आफनो बोली फुत्किएको भेउ पाएका देउवाले त्यसपछि आधाउधी पढे, त्यसपछि नहेरी बोल्न थाले ।
यसमा प्रधानमन्त्रीलाई हरेक किसिमका सल्लाह र सुझाव दिने भन्दै सेतो हात्तीका रुपमा राखिएका विज्ञ समूह दोषी छन । कमसेकम प्रधानमन्त्रीलाई एक पटक भाषण देखाउनु पर्छ कि पर्दैन ? देउवाले भाषण हेर्न भ्याएनन भनेपनि गाडीमै भएपनि देखाउनु पर्छ कि पर्दैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई जसले जे थमाएर पनि पढाउन लगाउने भए किन चाहियो बिज्ञ समूह सल्लाहकार ? यस अघि सप्तरीमा पनि यस्तो घटना नभएको होइन ।
बाढी पीडितलाई राहत वितरण गर्न जाँदा एउटा वक्तव्य पढ्नु पर्नेमा अर्कै पढेर सामाजिक सन्जालमा हास्यपात्रको रुपमा चित्रित भएका थिए । किन यसपटक फेरि दोहोरियो यस्तो घटना ? पक्कै पनि उनका सहयोगीहरुको हेलचेक्र्याइले नै हो ।